‘पलाँस’को लिरिकल गीत सार्वजनिक, कुन रुपमा आउनेछिन् रेखा ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
‘पलाँस’को लिरिकल गीत सार्वजनिक, कुन रुपमा आउनेछिन् रेखा ?
चैत्र १८ गते रिलिज हुने नेपाली चलचित्र ‘पलाँस’को एक गीतको लिरिकल भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । ‘हेल्प लिन सक्छौ म बाट’ बोलको गीतमा गायक सुगम पोख्रेलको आवाज छ ।
सुवास कोइरालाको निर्देशनमा बनेको चलचित्रमा नायिका रेखा थापा, अयुव केसी, कामेश्वर चौरासियाको मुख्य भूमिका छ । रेखाको भूमिकालाई अहिलेसम्म निर्माणपक्षले गोप्य राखेको छ । निर्मात्री चौलागाइका अनुसार, ट्रेलर सार्वजनिकसँगै रेखाको भूमिका खुल्नेछ ।
यसैविच, चलचित्रको ‘हेल्प लिन सक्छौ म बाट’ बोलको गीतको ‘कभर गीत प्रतियोगीता’ आयोजना गरिएको छ । फाल्गुण ९ गतेबाट चैत्र १५ गतेसम्म यो गीतको कभर गीत गाएर पठाउन सकिनेछ । गीत गाएको अडियो वा भिडियो तयार गरेर ‘पलाँस’को अफिसियल फेसबुक पोजमा पोष्ट गर्न सकिनेछ ।
फेसबुकमा पोष्ट भएका गीतमध्ये १ लाइकको १ अंक र १ शेयरको २ अंक प्रतियोगीले प्राप्त गर्नेछन् । प्राप्त कभर गीतमध्ये उत्कृष्ट ५ को चयन गरिनेछ । यसपछि, ‘पलाँस’को टिमले विजेताको घोषणा गर्नेछ । विजेताले १ लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने निर्माणपक्षले जनाएको छ ।
यस्तै, ५ उत्कृष्ट कभर गीत गाउने प्रतियोगीले विशेष गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गर्नेछन् । लाइक र शेयर बढाउनका लागि फेसबुकमा वुष्ट गर्नेलाई असक्षम घोषणा गर्न समेत सकिने, शर्त राखिएको छ ।